Diyopost.com :: यी हुन् शरीरमा सिक्का पैसा लगाएर हिँड्ने ‘सिक्काबाबा’, भन्छन्,‘गिनिज बुकमा नाम लेखाउँछु’ यी हुन् शरीरमा सिक्का पैसा लगाएर हिँड्ने ‘सिक्काबाबा’, भन्छन्,‘गिनिज बुकमा नाम लेखाउँछु’ - Diyopost.com
यी हुन् शरीरमा सिक्का पैसा लगाएर हिँड्ने ‘सिक्काबाबा’, भन्छन्,‘गिनिज बुकमा नाम लेखाउँछु’
काठमाडौँ । होँचो कद । पातलो शरिर । केही कालो वर्ण । शरिरभरि टाँसिएका १५ किलो बराबरको सिक्का । साथमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पनि । आम मानिस भन्दा केही फरक देखिन्छन् उनी ।
यस्तै हुलिया लिएर कहिले पूर्व त कहिले पश्चिम तिर भौतारिन्छन् । बिगत ६ वर्षयता ठाँउ–ठाँउमा आफ्नो परिचय स्थपनाका लागि घुमन्ते बनेका उनी केही महिना पहिले सुदुरपश्चिमको धनगढीमा भेटिएका थिए । हिजो आज भने काठमाडौँका गल्लीहरुमा देखिन्छन् । पहिचानको खोजी मात्र होइन, जातीय मुक्ति र देशलाई विश्वसामु चिनाउने सपना बोकेर हिडेका उनीसंग केही सपना छन्, केही रहर छन् र फरक पहिचान बनाएर विश्व सामु देशलाई चिनाउने धोको पनि छ । हो, तिनै फरक मान्छे जसलाई आम मानिसले पागलको संज्ञा दिन समेत पछि पर्दैनन्् । उनी हुन्, कास्की हेम्जाका ४३ वर्षिय रामबहादुर परियार उर्फ–‘सिक्का बाबा’ ।
रामबहादुर परियार ‘सिक्का बाबा’को नामले चिनिन थालेको ६ वर्ष भइसक्यो । के शरीरभरि सिक्का टासेर पनि पहिचान निर्मण हुन्छ त ? राम बहादुर यो प्रश्नको सटिक उत्तर दिन्छन्,– ‘हामीले सधै अरुले नगरेको काम गर्नु पर्छ, त्यही भनेर नै मैले यसो गरेको हो’ । उनले आफुले लगाउने लुगामा दुईसय ६ देशका झन्डै १५ किलोग्राम सिक्का टाँसेका छन् ।
साथमा नेपाली झण्डा सहित नेपाली भादगाउँले टोपी लगाएर विश्व भ्रमणमा निस्किने तयारीमा छन् ।
एउटा पाललो शरिरमा १५ किलोको सिक्का टाँसेर हिड्दा उनलाई कहाँ सजिलो छ र ? शरिरभरि सिक्का टाँस्नुकोे रहस्योद्घाटन गर्दै उनी भन्छन्– ‘मैले सपनामा दखेको कुरालाई बिपनामा साकार गर्दैछु ।’ जतीबेला उनी नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको जुत्ता सिलाउने काम गर्थे । सेना प्रहरीको जुत्ता सिलाउने काम भए पनि उनको त्यो सरकारी जागिर थियो । एकदिन उनले एउटा यस्तो सपना देखे, आफ्नो शरिर भरि सिक्कै–सिक्का टाँसिएको र त्यही सिक्का बोकेर संसार घुमेको । सुरुमा उनले आफ्नो सपनालाई वास्ता गरेनन् । दिनभरि जुत्ता सिलाए, साँझ घर फर्किए । मानौं उनले त्यो सपना बिर्सिसकेका थिए । तर त्यही सपना दोस्रो र तेस्रो रात पनि लगातार देखे पछि उनलाई अचम्म लाग्यो । किन यस्तो सपना देखे हुँला भनेर मनमा हजार कौतुहुलता जाग्यो ।
त्यसपछि आफैले मनमा एउटा संकल्प लिएर निद्रामा देखेको सपना वास्तविक जीवनमै पुरा गर्ने संकल्प गर्न थाले । मनमा अठोट लिए र सिक्का जम्मा गर्न तिर लागे । सुरुमा सिक्का जम्मा गर्न नै उनलाई मुस्किल थियो । सरकारी जागिर र आफ्नो सीप नै त्यागेर सपना पुरा गर्न तम्सिएका परियारले निकै अपप्ठ्यारोको सामना गर्नु पर्यो । ‘सुरुमा त मान्छेलाई आफ्नो बारेमा बुझाउनै गाह्रो,’ उनले भने,‘सबैले बौलाहा भनेर हेप्ने र खिसी–ट्युरी समेत गर्थे ।’
सुरुमा नेपाली र केही भारतीय सिक्का जम्मा गरेर कपडामा टाँसेका उनले पोखराको लेकसाइडतिर घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको सहयोगमा अन्य देशका सिक्का समेत जम्मा गरे । उनीसंग यतीबेला २०६ देशका सिक्का छन् । उनले अगाडी र पछाडि दुवैतिरबाट लगाउन मिल्ने १९ वटा कपडाको टुक्राबाट एउटै कमिज र सुरुवाल उनी आफैले सिलाएर ती सिक्का त्यही कपडामा टाँसे । आफ्नो चिनारीका रुपमा उनले ती सिक्का टाँसेको कपडा लगाएर हिँड्न थाले । सिक्का टाँसेको कपडा लगाएर उनले २ पटक पुरै नेपालको भ्रमण गरि सकेका छन्् । २०६९ मङ्सिर २१ गतेदेखि भ्रमण थालेका परियारले नेपालका ७५ जिल्लामा पुरेर सिक्का प्रदर्शन गरिसकेका छन् । १७ वर्षभित्र विश्वभ्रमण गरिसक्ने उनको योजना छ । शान्ति, स्थिरता र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनसंगै जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने दबाबमुलक सन्देश दिन विश्व भ्रमण सुरु गर्न लागेको उनको भनाई छ ।
विश्व भ्रमणको सुरुवात भारतबाट गर्ने उनको तयारी छ । त्यस पछि अन्य देशमा पनि नेपाल र नेपालीको शान राष्ट्रिय झण्डा सहित सिक्का प्रदर्शन गर्ने आफ्नो योजना रहेको उनले बताए । यसका लागि उनले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थालाई गुहारेर, व्यवसायी तथा अन्य सहयोगी मार्फत आर्थिक संकलन गरि भ्रमण खर्च जुटाएका छन् । विश्व भ्रमणका लागि चाहिने सबै आवश्यक तयारी पुरा गरेको भए पनि नेपाल सरकारले नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा भ्रमणका लागि मान्यता नदिएका कारण विश्व भ्रमणमा निस्किन नपाएको उनको गुनासो छ । उनीसंग राहधानी समेत छैन । उनले काठमाण्डौ आई राहदानीका लागि पराराष्ट्र मन्त्रालयमा आग्रह समेत गरेका थिए । तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापासंग राहदानीका लागि कुरा समेत भएको उनी बताउँछन् । “मन्त्रीले सोचौँला मात्र भन्नु भयो तर पछि जाँदा मन्त्रीका तलका मान्छेले उहाँलाई पनि भेट्न दिएनन्,” दुखेसो पोख्दै उनले भने ।
त्यसपछि उनले राहदानी बनाउनका लागि गृह मन्त्रालयसंग पनि आग्रह गरेका थिए । गृहमन्त्रीले निवेदनमा तोक लगाइदिए पछि निवेदन दर्ता भएको तर सचिवले भोलि– भोलि भन्दै टारेको र अन्त्यमा झपारेर पठाएको उनले बिर्सेका छैनन् । “दिनुहुन्न भने ठिकै छ, भन्दै म पनि आफ्नो बाटो लागे ।” मन्त्रालयका कर्मचारीको कार्यशैलीका कारण आफु पीडित भएको प्रति उनको गुनासो छ । सरकार गरिवका लागि नभएर धनीको मात्र भएको उनको ठम्याँई छ । भन्छन्,– “सरकारले हामी जस्ता गरिवलाई कहाँ सहयोग गर्छ र ?” तर पनि उनको विश्व यात्रा गर्ने चाहानामा कत्ति पनि कमी भएको छैन । पासपोर्ट बनेपछि सरकारले फुकुवा गर्ने बित्तिकै भ्रमणमा निस्किने उनले बताए ।
काठमाडौँमा आफु पटक–पटक अपमानित हुनु परे पनि अन्य जिल्लामा भने आफ्नो स्वागत हुने गरेको उनी बताउँछन् । बाहिरी जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले समेत आफूलाई सहयोग गरेको उनको भनाई छ । प्रत्येक जिल्लामा जाँदा सुरक्षा र खान बस्नको व्यवस्था त्यहीँको प्रहरी प्रशासनले मिलाउँदै आएको पनि उनले बताए । तर, यात्राका क्रममा कपडामा टाँसेका कैयौँ सिक्का खस्ने गरेका कारण सिक्का सम्हाल्न मुस्किल भएको प्रति उनको चिन्ता छ । त्यसो त, सिक्का हराउने मात्र नभएर चोरी हुने संभावना पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले उनले लुटपाट र चोरी नहोस् भनेर पच्चहत्तरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वकृति समेत लिएका छन् ।
एकदिन हेम्जास्थित आफ्नै घरमा कपडा धोइरहेका उनलाई एकजना अपरिचित ब्यक्तिले फोन गरे । नयाँ नम्बर भएका कारण उनले त्यो फोन उठाएनन् । धेरै बेर सम्म फोन बजेपछि फोन उठाए । फोनमा उक्त अपरिचित ब्यक्तिले आफु एक गैर सरकारी संस्थाको मान्छे भएको र विश्व भ्रमणका लागि आफ्नो संस्थाले सहयोग गर्ने भन्दै उनलाई काठमाडौँ आउन आग्रह गरे । खुसी हुँदै उनी काठमाडौं हानिए । र, फोन गरेर बोलाउने उक्त ब्याक्तिलाई सम्पर्क गरे तर सम्पर्कमा आएनन् । धेरै दिनदेखि उनी आफुलाई फोन गर्ने ब्यक्तिको खोजी गर्दै काठमाण्डौँका गल्ली तिर भौतारिए तर लाख कोसिस गर्दा पनि भेट हुन सकेन । आफुलाई फोन गरेर ठग्ने उक्त ब्यक्तिका कारण आफुले दुख पाएको उनी बताउँछन् । यस्ता मान्छे समाजमा धेरै भएको र सोझा र इमान्दार ब्यक्तिहरु त्यसको सिकार हुने गरेको उनको भनाई छ ।
सामाजिक मुद्दा लिएर विश्व यात्रामा जाने सपना पालेर हिँडेको आफूमाथि राज्यले भने हेलाहोँचो मात्रै गरिरहेको उनको गुनासो छ । ‘म देशको नाम उचाईमा पुर्याउँन हिँडेको हुँ,’ उनी भन्छन्,‘मलाई राज्यले न्याय गरिदियोस् । मेरो सपना पुरा गर्ने सारथी बनिदियोस् ।’
चुरोटको लत छुटाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यि चार उपाय !
काठमाडौँ,६ असोज । वर्तमान समयमा किशोर किशोरी देखी लिएर वृद्धवृद्धाहरु चुरोटको दुव्र्यसनबाट पिडित छन । किशोर किशोरी हरु संगतको कारणले ...
मलेशियामा विषाक्त मदिरा सेवन गरी ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ६ पुग्यो
काठमाडौं, असोज ३ । मलेसियामा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्या आज बिहानसम्म छ पुगेको छ । विषाक्त मदिरा ...
परिवार नियोजनबारे जानकारी भएपनि प्रयोग कम
काठमाडौँ, २ असोज । परिवार नियोजनका बारेमा आम व्यक्तिलाई जानकारी छ तर प्रयोगदर भने न्यून नै रहेको पाइएको छ । ...
किन दुख्छ ढाड ? कस्ता व्यक्तिलाई दुख्छ ढाड !
पछिल्लो समयमा ढाड दुख्ने समस्या भएको बिरामीको संख्या बढ्दो छ । अव्यवस्थित जीवनशैली, खानपान,शारीरिक मुभमेन्ट, बसाई नमिल्नु आदि कारणले ढाड ...
यस्ता छन् सय वर्ष नाघेका तन्नेरी !
धनकुटा, भदौ ३१ । दैनिक ६ घण्टाा कम्तीमा खटाइ । उनको लगन, खटाइ र स्फूर्ति देखेर सबै चकित पर्छन् । ...
तपाईको तातु खुईलिने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस् !
काठमाडौं । कपाल झरेर तालु खुइलिने समस्याको उपचार हड्डीसम्बन्धी एक प्रकारको रोग ओस्टेओपोरोसिसका लागि प्रयोग हुने औषधिबाट हुन सक्ने बलियो ...
जहाँको पानी नमिसाइ स्थानीयबासिन्दाको खाना पाक्दैन
परासी, भदौ २८ । पश्चिम नवलपरासीमा एउटा यस्तो पोखरी छ जहाँको पानी नमिसाई त्यहाँका स्थानीयवासीको खाना पाक्दैन् भने पोखरीको माछा ...
यस्ता देखिए तिजको दिन महिलाहरु ! (फोटो फिचर सहित)
काठमाडौं, भदौ २८ । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर र देशका विभिन्न धार्मिक स्थलहरुमा ...
‘सुस्त बालिका’ लाई गर्भनिरोधक ३ महिने सुई !
काठमाडौं, भदौ २६ । जन्मँदा उनको अवस्था सामान्य थियो । हुर्कँदै जाँदा आम शिशुभन्दा फरक देखिईन । टाउको सानो, अनुहार ...